Induku, Bar, Tube
Shaft, Holder, edibanise
Khalisa, Circle, ingqosha esisangqa kunye gasket
CNC Lathe Machining Computer nenani Wolawulo okanye CNC Lathe oomatshini zisetyenziselwa ukuvelisa iindawo ngokujika intonga zokufunda ezikhethiweyo kwaye nokondla izixhobo ezahlukeneyo nangokukrola kulo mbandela kubunzulu yokwahluka engile. Le oomatshini ivumela ukuba siveze iindawo ngqo kakhulu otheni okanye akukho bokulungelelanisa. Main Products lathe yethu metal ukwala izixhobo kunye namava CNC lathe machining sikwazi ukuhlangabezana neemfuno uluhlu olubanzi izicelo zabathengi. Uthwala ukuvelisa preci ...
Computer nenani Wolawulo okanye CNC Lathe oomatshini zisetyenziselwa ukuvelisa iindawo ngokujika intonga zokufunda ezikhethiweyo kwaye nokondla izixhobo ezahlukeneyo nangokukrola kulo mbandela kubunzulu yokwahluka engile. Le oomatshini ivumela ukuba siveze iindawo ngqo kakhulu otheni okanye akukho bokulungelelanisa.
lathe yethu metal ukwala izixhobo kunye namava CNC lathe machining sikwazi ukuhlangabezana neemfuno uluhlu olubanzi izicelo zabathengi. Uthwala ukuvelisa ngqo iindawo metal ngobubanzi encinanana 0,012 "(0.31 mm) kunye nobude ifana 0,032" (0.81 mm), izixhobo zethu nako ukubonelela ubude ukuya ku-12 "(304.8 mm) kunye ngobubanzi ukuya ku-12" (304.8 mm).
Siqesha izixhobo zethu lathe multi-njongo kunye CNC nobuchule zokuhlela ukwakha uluhlu iimilo kumphezulu, ukususela kokulula ukuya zezindlu entsonkothileyo yaye kubandakanywa kunye neemilo etsobhileyo. Kuba ukususwa ngqo ngesinyithi, machinists anobugcisa ukusebenzisa iintlobo omangalisayo ubuchule kunye uqoqo imibono nesilili nomnye umatshini wethu abongi kunye uqoqo position-12 ukuya baphumeze uluhlu olubanzi lweempawu part. Ezi ziquka (kodwa akuphelelanga apha) Wabaguqukela, uyadika, ukubhola, zomsonto (olwangaphakathi nolwangaphandle), olujoliswe lwangaphakathi, grooving, ubuso grooving, kwicala zatshintsha, indlela yokubeka, ejongene, knurling, lunqamle-off, chamfering awukaze off, kwaye radiusing.
CNC lathe Machining kwenziwe ezi milo ezifana iifoto abonisa, Kwakhona, lathe Machines yethu Precision CNC iye machining amalungu piece nocoselelo nokubonelela ngeenkonzo-value added ngenxa aerospace, unxibelelwano, zonyango, elektroniki kunye nezinye amashishini ezifana nezakho.
Previous: YoMlilo, Pin
Next: Induku, Bar, Tube
Yenza ingxubevange Glass nokubopha ngezikhonkwane
Aluminium Cnc Machining iinxalenye
Aluminium 7075 Cnc Machinery Parts
Aluminium 7075 Junction Box Cnc Milling Service
Aluminium Cnc ngomshini Parts
Aluminium Cnc zomsonto Ivula Izahlulo
Cnc Auto Parts Parts Milling
Centre Cnc Machinery Parts
Cnc Elungiselelweyo Medical Equipment Part
Cnc Lathe Ivula Izahlulo
Cnc ngomshini Aluminium Parts
Cnc ngomshini Teflon Parts
Cnc Machining Izixhobo Electronic Izahlulo
Cnc Machining Inxalenye For Production Izixhobo
Cnc Machining Ivula Part
Cnc Milling Electronic Izixhobo Parts
Cnc Swiss Screw Parts Machine
Izahlulo Cnc Liba
Cnc Ivula Drawing Izahlulo Aluminium
Cnc Turning Hardware Izahlulo
Cnc Ivula Machining Aluminium Parts
Cnc Ivula Metal Izahlulo
Glass lokubopha ngezikhonkwane For Sale
Demand High Cnc Machining Parts
Lathe Iinxalenye Ivala
• Umngundo Cnc Machine Centre
Engesiso Bushing Manufacturer Ukuhambisa Indawo High-Quality ngomshini
OEM Metal Ivula Lathe Part Cnc Machining
Precision Cnc ngomshini Parts
Precision Lathe ngomshini engaphakathi Ring Parts
Precision Lathe ngomshini Pistion Ring Parts
Ukuvula Metal Iinxalenye
Used Cnc nkqo Machining Centre